ဒူဒူကြီး: Flow metering - Principle of Flow metering
fluid ရဲ့ flow rate ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါ၊ Reynolds number ပေါါမူတည်ပြီး၊ ပေါါပေါက်လာတဲ့ transition region, laminar region နဲ့ turbulent region တို့ကြောင့်၊ flow metering အတွက်အသုံးပြုမယ့်၊ instruments တွေမှာ repeatability, uncertainty နဲ့ accuracy တို့ကို၊ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ကာ တည်ဆောက်ရပါတယ်။
flow meter မှာဖတ်ယူရရှိတဲ့၊ value ဟာ၊ အမှန်တကယ်ရှိတဲ့ flow rate နဲ့၊ ထပ်တူထပ်မျှတူတဲ့ identical flow rate အဖြစ်၊ တကြိမ်ထက် ပိုပြီးဖတ်ယူရရှိနိုင်ခြင်းကို၊ repeatability လို့ခေါါပါတယ်။ meter ကို၊ calibration လုပ်တဲ့အခါ meter ရဲ့ repeatability နဲ့ accuracy တို့ကို မှားယွင်းရောထွေးတတ်ပါတယ်။ flow meter မှာ repeatability ဟာ၊ အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပေါါနေတဲ့အခါ ဖတ်ယူရရှိတဲ့၊ value inaccurate တိကျမှန်ကန်ခြင်းမရှိဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ steam ရဲ့ flow rate ကိုတိုင်းတာတဲ့ အခါ၊ accuracy ထက်၊ repeatability ကိုသာ၊ အဓိကအလေးထာကာတိုင်းတာပါတယ်။
နောက်ပိုင်းပေါါလာတဲ့ flow meter တွေမှာ၊ accuracy ထက် uncertainty ဆိုတဲ့၊ အသုံးအနှုံးကိုပိုမိုသုံးစွဲ လာတာတွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့၊ flow meter (95 %) လောက်ဟာ၊ uncertainty calculated flow meters တွေဖြစ်ပြီး၊ statistical concept အဖြစ်ရေးဆွဲထားတဲ့၊ uncertainty guide line - EN ISO/ IEC 17025 standard အရ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
accuracy ဟာ၊ true value အနေနဲ့ တိုင်းတာရရှိတဲ့ တန်ဘိုးမဟုတ်ပဲ၊ flow meter ရဲ့ performance သာဖြစ်ပါတယ်။ calibration procedure အတွက်သုံးနှုံးတဲ့၊ အသုံးအနှုံးဖြစ်ပြီး၊ flow meter မှာ၊ indication အနေနဲ့ correct flow rate value ကို 'true' value အဖြစ်၊ ဖော်ပြနိုင်ခြင်းလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ accuracy ကို၊ ချိန်ညှိတဲ့အခါ၊ ISO 5725 standard guide line ကိုလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။
accuracy ကိုဖော်ပြတဲ့အခါ၊ actual reading ဒါမှမဟုတ် FSD လို့ခေါါတဲ့ percentage of full scale deflection method တို့နဲ့၊ ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
actual reading method ကို percentage of measured value method လို့လည်းခေါါပါတယ်။ accuracy ကို ±3% of actual flow လို့ဖော်ပြထားတဲ့၊ flow meter တလုံးနဲ့ ဥပမာပေးဖော်ပြပါ့မယ်။ flow meter မှာ indicated flow rate ဟာ၊ 100 Kg/ hr နှုံးလို့ ဖတ်ယူ ရရှိခဲ့လျှင်၊ accuracy ±3% ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ 'uncertainty' of actual flow အနေနဲ့ 970 Kg/ hr နှုံး ဒါမှမဟုတ် 1030 Kg/ hr နှုံးနဲ့ စီးဆင်းနေတယ်လို့၊ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ အလားတူ indicated flow rate ဟာ၊ 500 Kg/ hr ဖြစ်ခဲ့လျှင် 485 Kg/ hr နှုံး ဒါမှမဟုတ် 515 Kg/ hr နှုံးလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
accuracy ကို ±3% FSD ဖော်ပြထားခြင်းကတော့၊ maximum flow rate ရဲ့ မှာပေါါပေါက်လာမယ့်၊ flow meter မှ full scale deflection သို့မဟုတ် measurement error ကို percentage နဲ့ ဖော်ပြခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ flow rate ကျဆင်းသွားတဲ့အခါ၊ error percentage မြင့်တက် လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ meter ရဲ့ indicated flow rate ဟာ၊ 100 Kg/ hr နှုံးလို့ ဖတ်ယူ ရရှိခဲ့လျှင်၊ 'uncertainty' of actual flow အနေနဲ့ 970 Kg/ hr နှုံး ဒါမှမဟုတ် 1030 Kg/ hr နှုံးနဲ့ စီးဆင်းနေတယ်လို့၊ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
Fig. Range of error
indicated flow rate ဟာ 500 Kg/ hr ဖြစ်သွားတဲ့အခါ၊ error ဟာ ±30 kg/ hr ရှိနေတဲ့အတွက်၊ 500 Kg/ hr - 30 Kg/ hr = 470 Kg/ hr (an error of -6%) နဲ့ 500 Kg/ hr + 30 Kg/ hr = 530 Kg/ hr (an error of +6%) အနေနဲ့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
flow meter ရွေးချယ်တဲ့အခါ၊ sufficient range အတွင်း၊ အသုံးပြုနိုင်မယ့် flow meter ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ 'turn-down' သို့မဟုတ် 'turn-down ratio', 'effective range' သို့မဟုတ် 'rangeability' အစရှိတဲ့၊ အသုံး အနှုံးတွေဟာ၊ accuracy နဲ့ repeatability tolerance တွေအတွင်းမှာ၊ အသုံးပြုမယ့် flow meter ရဲ့ range of flow rate ကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ flow meter ရဲ့ capacity ဟာ၊ maximum demand နဲ့ ကိုက်ညီဖို့လိုသလို၊ anticipated flow variations တွေဖြစ်ပေါါတိုင်း၊ encompass ဆိုတဲ့ indicating အမှန်တွေဖော်ပြနိုင်ဖို့ turn-down ratio ပမာဏကြီးမားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
Fig. Accumulated losses due to insufficient turndown
ဥပမာအနေနဲ့ maximum expected flow rate 1000 Kg/ hr နှုံးရှိတဲ့၊ steam system တခုကိုဖော်ပြ ပါ့မယ်။ turn down ratio ဟာ (4 : 1) ရှိတယ်လို့၊ flow meter မှာဖော်ပြထားတဲ့အတွက်၊ minimum flow rate ဟာ 1 000 ÷4= 250 kg/ hr နှုံးရှိပြီး၊ meter ရဲ့ accuracy နဲ့ ကိုက်ညီဖို့လိုပါတယ်။ အကယ်၍ flow rate ဟာ minimum flow rate 250 Kg/ hr အောက်ကို၊ ကျဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်၊ meter မှာ large flow error indicating တွေပေါါပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ 250 Kg/ hr နှုံးအောက်မှာရှိတဲ့ flow rate ဟာ၊ meter အတွက် inaccurate flow rate အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ meter မှာ 'lost flow' လို့ခေါါ ပါတယ်။
Fig. Typical turn-down ratios of commonly used flow meters
အသုံးများတဲ့ flow meter types တွေကတော့၊ orifice plate flow meter, shunt flow meter, vortex flow meters, spring loaded variable area flow meter - position monitoring နဲ့ spring loaded variable area flow meter - differential pressure monitoring type တို့ဖြစ်ပါတယ်။ orifice plate type ဟာ (4:1) turn down ratio ရှိပြီး၊ shunt type ဟာ (7:1) နဲ့ vortex type ကတော့ (25:1) turn down ratio ပမာဏရှိပါတယ်။
spring loaded variable area flow meter - position monitoring နဲ့ spring loaded variable area flow meter - differential pressure monitoring type flow meters တွေကတော့၊ turn-down ratio ပမာဏကြီးမားတဲ့၊ flow meters တွေဖြစ်ပြီး၊ position monitoring flow meter ဟာ (50:1) နဲ့ differential pressure monitoring flow meter ကတော့၊ (100:1) turn down ratio ပမာဏ ရှိပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ spring loaded variable area flow meter - differential pressure monitoring type flow meters တွေကို၊ အသုံးများတာတွေ့ရပါတယ်။
flow meter တွေဟာ၊ (၁၇၃၈) ခုနှစ်က၊ ပေါါပေါက်ခဲ့တဲ့ Bernoulli's Theorem ကိုအခြေခံပြီး၊ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Bernoulli's Theorem ဟာ SFEE ဆိုတဲ့ Steady Flow Energy Equation ဖြစ်ပြီး၊ 'pipe line ရဲ့ overall effects of fraction ကို၊ လျှစ်လျှူရှုထားတဲ့ အခါ၊ pressure energy, kinetic energy နဲ့ potential energy တို့ရဲ့ စုစုပေါင်းရလဒ်ဟာ၊ piping system ရဲ့ မည်သည့် အမှတ်မှာမဆို၊ တည်ငြီမ်နေမယ်' လို့၊ ဆိုထားပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 23:08